Human Rights Watch Yokurudzira Kuti Vana Vasashandiswa Mumapurazi eFodya
Kubvumbi 05, 2018
Zimbabwe iri kukurudzirwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu, reHuman Rights Watch, kuti ichengetedze kodzero dzevana vachiri pasi pezera, avo vari kushandiswa muminda yefodya zvisiri pamwero.
Sangano iri raparura gwaro reongororo yarakaita pakushandiswa kwevana vadiki mumapurazi efodya munyika.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, vaudza Studio 7 kuti vana vari kushandiswa mumapurazi efodya zvinoita kuti muchetura we ‘nicotine’ upinde muganda ravo uchikonzera zvirwere.
VaMavhinga vanoti sangano ravo rayambira hurumende pamusoro pezvirwere izvi uye kuti idzike mitemo yakasimba inobatsira vana ava uye vanhu vakuru vari kushanda vasina kupfeka mbatya dzinodzivirira muchetura uyu.
“Pane chirwere chikuru chinobva mukubata fodya, ingava nyoro kana yakaoma, kana paya painopiswa chinonzi muchetura we ‘nicotine’. Kana vana vachishanda mumunda vanenge vachinzwa kupera simba, kuda kurutsa, kusvotwa kana kuita sevane nyongo. Ndizvo zvimwe zviratidzo zvekuti pane chirwere ichocho,” VaMavhinga vakaudza Studio 7. “Takaonazve kuti vana nevabereki nevarimi vefodya vazhinji, vange vasingatozivi dambudziko iroro.”
VaMavhinga vanoti vakaita hurukuro nehurumende pamusoro penyaya iyi uye vakavimbiswa kuti hurumende ichaedza kugadzirisa nyaya iyi kutanga nekuisa mitemo yakasimba inochengetedza hutano hwevana.